Qalabka iyo Barnaamijyada igu Haya Meheradda | Martech Zone
Qalabka iyo Barnaamijyada igu Haya Meheradda
Khamiista, Diseembar 24, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Lixdii bilood ee la soo dhaafay waxay ahaayeen kuwo dhib badan maadaama aan bilaabay ganacsi u gaar ah. Caqabada ugu weyn ayaa ah socodka lacagta… waxaad si dhakhso leh u ogaatay in kastoo aad si adag u shaqeyneyso, lacagtu qasab maaha inay albaabka ku soo socdaan. Natiijo ahaan, waxaan u ordayaa caato oo aan ula jeedaa. Xitaa runtii kamaan adeegan boos xafiis xilligan.
Waxaan u maleynayay inaan la wadaagi doono burburka qalabkeyga ganacsiga. Ma haysto wax khaas ah oo runtii waxaan u shaqeeyaa si aan u ilaaliyo kharashyada sida ugu yar ee suurtogalka ah.
Macbookpro - Ma lihi kii ugu dambeeyay, laakiin kani waa mashiinka shaqada. Waxaan jeclaan lahaa inaan helo nooc cusub, laakiin waxaan joojinayaa kharashka in muddo ah. My Mac wuxuu u shaqeeyaa Leopard si qurux badan laakiin wuxuu xiraa shaashad labaad oo weyn waxayna u timaadaa hakad. Kani wuxuu noqonayaa qarashkeygii ugu weynaa sanadkaan 2010 maadaama aan doonayo inaan cusbooneysiiyo.
Xadhig dheeri ah oo loogu talagalay MacBookPro - laptop kastaa waa inuu la yimaadaa ugu yaraan 2 xadhig… mid uu shaqada kaga tagayo iyo mid uu ku haysto shandadaada! Muddo!
Western Digital 250Gb USB Drive - kani waa keydkayga koowaad ee xogta macmiilka, oo aan sidoo kale ku kaydiyo khadka tooska ah. Waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan helo a Kaabsol Waqti xafiiska guriga.
Blackberry 8330 - mahadsanid Adam ku talinta taleefankan. Kala badh maskaxdaydu waxay ku jirtaa taleefankan. Waa la waafajinayaa Google Apps, wuxuu leeyahay kamarad, Evernote, Twitter, Facebook iyo xitaa Foursquare oo hadda ku yaal.
Flip Mino HD - helitaanka agabyada fiidiyowga ayaa caqabad ku ah nin wax badan qora, laakiin tani waa kamaradda ugu dambeysa HD ee shaqada! Isku dar ah iMovie iyo Camtasia ee Mac - sameynta filimada ma fududaan karin.
Mikrofoonka Blue Snowflake - Waxaan ku duubay xoogaa bandhigyo ah iyo cajalado maqal ah makarafoonkan waana wax cajiib ah. Aad ayuu ugafiican yahay makarafoonka laptop-ka asalka ah!
Dhegaha Sony - oo lagu daray Pandora's kumbuyuutarka kumbuyuutarka ee kumbuyuutarka (widget widget), si fudud kuma qaldami kartid kuwan. Wax walba way tirtiraan.
Ogio Bacda boorsada laga bilaabo eBags. Boorsadan (Hip Hop model) wax kayar oo cabsi ah… lix bilood oo lagugu jiiday, lagusoo tuuray, laguna garaacay ilaa hadana waxay umuuqataa mid cusub. Waxaan jeclaan lahaa in garabka garbaha ay yeeshaan, inkastoo.
iPod Touch - Weli waan ku ciyaarayaa dhammaan barnaamijyada, ragga. Waxaa laga yaabaa inaan kan siiyo caruurta oo aan helo nooc cusub, in kastoo… Bill wuxuu ii sheegayaa in kuwa cusub ay makarafoonno ku dhex jiraan!
Freshbooks - Dhammaan qaan-sheegashada macmiilkeygu waxay ku dhacaan Buugaagta Freshbooks. Haatan waxaan heystaa 2 saaxiibo kale oo isticmaalaya… waa Software aad u cajaa'ib badan oo xalka Adeeg u ah maareynta macaamiishaada.
DropBox - Ilaa hadda, tani waxay ahayd tan ugu fiican ee kaydinta khadka tooska ah iyo nidaamka maareynta faylasha ee aan isticmaalay. Waxay si toos ah ugu dhafan tahay OSX iyo Windows labadaba si loo jiido loona yareeyo fududaanta. Waxaan hayaa tan oo asxaab ah oo isticmaalaya waxaanuna ku wareejinaa feylasha macaamiisha waaweyn dib iyo gadaalba fudayd.
Abka Google ee Boostada - barnaamijyada intiisa kale aad ayey u nuugaan marka loo eego Xafiiska (waa ka xumahay Google), laakiin Google Apps waxay u qalantaa $ 50 / yr pricetag kaliya emaylka ganacsiga. Awooddeyda inaan isku waafajiyo oo aan maareeyo emayllo badan iyo codsiyada jadwalka waa wax cajiib ah.
My Codsiga 1aad ee 2009 waa, shaki la'aan, Tungle. Waxaan kaliya la kulmay qof maalin dhaweyd oo ka hadlaya inta jeer ee ay taleefanka ku jiraan iyo iimaylka oo aan isku dayayo in aan ballan qabsado. Tungle waxay si aan caadi aheyn u fududeyneysaa. Waxay si iskudhafan leh ula shaqeysaa jadwalada Google sidoo kale - markaa wakhti kasta oo aan leeyahay qalad jadwal - badanaa waa inaanan si sax ah u duubin.
Tags: qaybinta warsaxaafadeedmiisaankasharebadhamada wadaagwaxyaabaha la wadaagi karo
Wadashaqeynta Xeerka-waqtiga dhabta ah ee kooxda
Software iyo Qalab Ma Noolaan La'ahay
waad ku mahadsan tahay faahfaahinta!